Wararka - Cetylpyridinium chloride sida Daaweynta loogu talagalay COVID-19
Cetylpyridinium chloride sida Daaweynta loogu talagalay COVID-19
Tijaabadu waxay muujisay inta jeer ee sare ee jeermiska dawada ee loo yaqaan 'ammonium disinfectants' sidii daaweyn loogu talagalay fayrasyo ​​badan, oo ay ku jiraan kuwa loo yaqaan 'coronaviruses': ficilladani waxay ka dhigayaan ficil-celinta daaha dufanka leh ee daboolaya fayrasyada sida SARS-CoV-2. Xeryaha Quaternary ammonium ayaa si ballaaran loogu talinayaa in la dilo fayrasyada waxaana jira in ka badan 350 alaabood oo ku jira EPA ee Liiska N: Jeermiska loo isticmaalo ka hortagga SARS-CoV-2 (Qalabka Dheeraadka ah. Isugeynta jeermiska jeermiska iyo waqtiyada lala xiriirayo (oo la xiriira fayrasyo ​​fara badan) qaar badan oo ka mid ah jeermiska kiimikooyinka ku jira liiska EPA ayaa la soo sheegay oo> 140 ay ku baabiin karaan fayraska daqiiqado yar gudahood (18).
Macluumaadkan wuxuu noo horseeday raadinta ballaaran ee isku-dhafka ammonium-ka ee quaternary oo leh firfircoonaan ka dhan ah coronaviruses iyo aqoonsiga suurtagalka ah ee kiimikooyinka horay loogu tijaabiyey rugta caafimaadka loona isticmaali karo daaweyn macquul ah COVID-19. Mid ka mid ah jeermis-dileyaasha la muujiyey inay wax u dhimayaan fayrasyada (Waxyaabaha Dheeraadka ah) oo si ballaadhan loogu isticmaalo alaabada daryeelka shakhsi ahaaneed waa cetylpyridinium chloride Dhismahan waxaa laga helaa inta badan daawooyinka lagu maydho afka waxaana ku taxan FDA sida Guud ahaan Loogu tixgaliyo Badbaado (GRAS) sida oo kale waxaa sidoo kale loo isticmaalaa inuu yahay wakiilka antimicrobial ee hilibka iyo digaagga wax soo saarka (illaa 1%). Cetylpyridinium chloride waxaa loo isticmaalay tijaabooyin caafimaad oo fara badan, oo ay kujirto daaweynta kahortaga infekshannada neefsashada oo ansaxinaya isticmaalkiisa sida fayraska kahortagga. Cetylpyridinium waxay u badan tahay inay dhiirrigeliso firfircoonida fayraska iyadoo burburinaysa capsid iyo sidoo kale iyada oo loo marayo ficilkeeda lysosomotropic, taas oo, sida kor lagu soo sheegay, ay ku badan tahay xeryaha ammonium ee quaternary. Tani waxay kor u qaadeysaa su'aasha ah in qaar ka mid ah daawooyinka lagu garto waxqabadka ka hortagga fayraska ee ka dhanka ah SARS-CoV-2 in vitro ay u dhaqmaan si isku mid ah, taas oo ah inay burburin karaan fayraska 'capsid' iyo sidoo kale ku urursashada 'lysosome' ama 'endosomes' iyo ugu dambeyntii xannibaya gelitaanka fayraska. Daraasado dheeri ah oo la daabacay waxay soo jeediyeen in saameyntan lagu yareyn karo isticmaalka ka hortagga Cathepsin-L.
Quaternary ammonium oo leh waxqabadyo loo yaqaan 'coronavirus activity'
FDA waa la oggolaaday
Amooniyam Koloriin Murine coronavirus, cagaarshowga C, Lysosomotropic Haa Isticmaallo kala duwan oo ay ka mid yihiin aashitada dheef-shiid kiimikaadka.
Cetylpyridinium chloride Hargabka, cagaarshowga B, cudurka dabaysha 1 Bartilmaameedyada capsid waana lysosomotropic Haa, GRAS Dawada jeermiska, dawada afka, qufacyada qufaca, alaabta daryeelka shakhsi ahaaneed, wakiilada nadaafada iwm.